Ukunyanzeliswa kweNdlela yokuGuqula iLothe ukuya kuMthengi | Martech Zone
Ukunyusa indlela yokuGuqula iLikhokelela kuMthengi
NgoLwesine, Septemba 4, 2014 Douglas Karr
Akukho kunqongophala kweenkampani ezifuna uncedo ngokuguqulwa kwabathengi. Sonke sixakeke kakhulu kwaye besisoloko silungile ekuphuhliseni iimveliso kunye neenkonzo ezintle, kodwa zihlala zisilela ekunikezeleni indlela egudileyo yokukhokelela ukuba ize kumthengi. Itekhnoloji yentengiso ibonelela ngezixhobo zokuvala umsantsa kunye nokukhulisa ezo zikhokelela ngokufanelekileyo.
Kule infographic evela UkufikelelaLocalUya kuthatha uhambo kunye nentengiso, yonke indlela ukusuka ekuqaleni kwayo njengethemba lokuba ngumthengi kwishishini elinye lasekhaya. Endleleni uya kudibana nomthengi wasekhaya okhangela, abafowunelwa, kwaye ekugqibeleni akhethe ishishini lendawo. Kwaye, uya kubona ukuba ukusebenzisa amaqhinga okuthengisa kwiinjini yokukhangela okusebenzayo, ezona ndlela zisebenza kwiwebhusayithi, kunye nolawulo oluzenzekelayo lokukhokela kunceda ishishini lethu lasekhaya lifikelele kumthengi njengoko esenza isigqibo sokuthenga.
Iindleko ziye zehla kakhulu kwiinkampani ukuba zisebenzise ithuba lokuba abathengi baphanda ukuthengwa kwabo okulandelayo-nangona kunjalo ziinjini zokukhangela, imidiya yoluntu, okanye iselfowuni. Akukho sizathu sokwenene sokuba ishishini lenze utyalomali kwaye silindele imbuyekezo kolo tyalo mali. Kukufumana nje iarhente okanye iqabane lobuchwephesha elikunceda apha endleleni.
tags: intengisoukuguqulwaindlela yokuguqulaumthengiKhokelakhokelaUkuThengiswa kweMfono kunye neThebhulethiindlela eya kuguqukoHlawula ngokucofa kanyePPCUkukhuthazwafikelelainjini yokukhangelayokukhangela injinienjini yokukhangela nounSEO